Ezemvelo Inkanyezi Zulu 2011 by Marc Russell Abbott - issuu
UNTULIKAZI - UZIBANDLELA 2010 EZEMVELO KZN WILDLIFE - THE OFFICIAL INTERNAL NEWSLETTER
1. Umcimbi wakusihlwa obuhlelwe yi-Ezemvelo KZN Wildlife
2. I-Ezemvelo KZN Wildlife igubha uSuku lokuzalwa kukaMandela 3. I-Ezemvelo KZN Wildlife nemidlalo yeNdebe yoMhlaba 4. Sihlabane ngophathina omqoka esizosebenzisana naye
REPORT POACHING: 08600 10111
STAY ANONYMOUS AND REPORT THOSE RESPONSIBLE FOR POACHING. THEY ARE STEALING YOUR CHILDREN’S HERITAGE
Umbono, Injongo kanye Nezimiso Ezimqoka Umbono
“Ukuba ngungqaphambili kwezokongiwa kwemvelo ehlukahlukene emhlabeni”
Nezimiso Ezimqoka •
Ukwethembeka – ngaso sonke isikhathi sisebenza ngokwethembeka, senze ngendlela efanele kanye nangeqiniso. Inhlonipho– sibekezelela izinhlaka esisebenzisana nazo, ngokuzithoba sihloniphe amalungelo azo kanye na-
wendalo. Ukubika– sibambisana nezinhlaka zethu ezinhlelweni zenhlangano ngokuvuleleka kanti futhi siyakwazi ukuphendula ngemiphumela yesikwenzayo. Ukusebenza ngokubambisana– sisebenza ngokubambisana ukufezekisa umbono wethu ngokulandela izimpokophelo esinazo. Ukuphucuzeka– siyinhlangano ejwayelekayo esebenzisa isiko lokwamukela imibono emisha nelokufunda. Ukwenza kahle kakhulu- siyinhlangano enenqubekela phambili futhi esebenza kahle ukuzuza okusezingeni nokuseqophelweni eliphezulu. Ukuzibophezela– ngaso sonke isikhathi senza umsebenzi wethu ngothando, ngokwethembeka nangokuzinikela. Umkhiqizo–sizimisele ngokukhiqiza ngesikhathi, ngendlela esheshayo futhi efanele.
Ithimba elididiyela izindaba UMhleli oyiNhlokoUDkt Bandile Mkhize UMhleli Ophethe uMaureen Zimu, noJeﬀ Gaisford ImiSebenzi yeziLimi nguPhilani Ncalane Ukuhlelwa kwamaKhasi neziThombe ngabeMediacom SA
Ilungelo lokuShicilela Inkanyezi iyiphephabhuku langaphakathi eliphuma ngekota yonyaka kanti lishicilelwa wuPhiko lwezokuXhumana kwa-Ezemvelo KZN Wildlife (Ezemvelo). Amalungelo akho konke okushicilelwe agodliwe kanti akumele kusetshenziswe ngaphandle kwemvume ebhalwe phansi yoMhleli oyiNhloko.
Umcimbi wakusihlwa obuhlelwe yi-Ezemvelo
Ikhasi lesi-2 Umbono, Injongo, Izimiso ezimqoka kanye noMcimbi wakusihlwa
Ikhasi lesi-3 kuya kwele-4 Amazwi oMphathi Omkhulu
INyuvesi yaseZululand izosebenza ngokubambisana neEzemvelo KZN Wildlife
I-Ezemvelo igubha uSuku lokuzalwa kukaMandela
IKhasi lesi-6 kuya kwelesi-7
I-Ezemvelo KZN Wildlife nemidlalo yeNdebe yoMhlaba
Abaqaphi beMvelo bakwa-Ezemvelo bahlomule ngezitifiketi zokusebenza kahle
Sihlabane ngophathina omqoka esizosebenzisana naye
Okuvela eHhovisi lokuHlelwa kweziNhlelo
Badaluliwe abanqobe uMncintiswano “wokuQanjwa kwaManqe”
Obonakala esithombeni ngoyedwa kwabahlabane ngemiklomelo ozothola ithuba lokuhambela indawo evikelekile ye-Ezemvelo KZN Wildlife. Obonakala ehleka kwesobunxele nguComfort Ngidi onguSihlalo weBhodi, ngu-Omie Singh onguSihlalo weKomidi lezoKongiwa kweMvelo kanye neNdalo esiShayamthetho saKwaZulu-Natali kanye noDkt Bandile Mkhize onguMphathu Omkhuli we-Ezemvelo.
I-Ezemvelo KZN Wildlife ihlele isiphihli somcimbi wakusihlwa ngesikhathi kune-Tourism Indaba e-International Convention Centre, eThekwini ngoNhlaba ka-2010. I-Ezemvelo ihlele umcimbi ngesikhathi kune-Tourism Indaba ngenhloso yokuqhakambisa ukuthi yenzeni ngonyaka odlule ukulungiselela izindawo zayo imidlalo yeNdebe yoMhlaba ka-2010. Izinhlaka ezahlukene kanye nezicukuthwane, bebemenyiwe kulo mcimbi kanti uDkt Mkhize wenze izethulo. Kube wubusuku obumnandi kanti nesiqubulo ebesithi “nethezeka esiQiwini.” Kuphindwe kwakhishwa indathane yemiklomelo enqotshwe ngababe nenhlanhla kwabebebambe iqhaza.
Amazwi oMphathi Omkhulu Imidlalo yeNdebe yoMhlaba kaďŹ ke yedlula kanti ishiye abantu baseNingizimu Afrika emagunjini omhlaba bezigqaja ngezwe labo ngokusingatha ngempumelelo lo mqhudelwano. Nasemlandweni, izwe lethu kalikaze libe yimbumba ngalolu hlobo njengoba beliyiyona ngesikhathi semidlalo yeNdebe yoMhlaba futhi siyethemba ukuthi lo muzwa wobumbano uzohlala ukhona ngaso sonke isikhathi. Ifulegi laseNingizimu Afrika lithole ukuhlonishwa kanti nomhlaba wonke ubukeka ususanganiswa yivuvuzela. I-Ezemvelo KZN Wildlife ibambe iqhaza emazingeni amaningi emalungiselelweni emidlalo yeNdebe yoMhlaba. Ukuhlelwa kwezinto sekunesikhathi kuqalile ngemicimbi eminingi efana nemiqhudelwano yebhola lezinyawo ngokunjalo nezinhlelo ezahlukahlukene ezigxile kwezamabhizinisi. Kuhlinzekwe u-R21.3 million wokulungisa lezo zindawo zokulala ebezibukeka zingahlomula ngokuvakasha kwabathandi bebhola. Lezo zindawo kube yiGiantâ&#x20AC;&#x2122;s Castle, iDidima, iThendele, iNtshondwe, uMlalazi kanye neMpila. Ngaphandle kokulungiswa kwalezi zindawo- obekuhlanganisa ukulungiswa kwengaphandle njengophahla lotshani ngokunjalo nemigwaqo-kanye nomsebenzi wokulungisa izinto ezincane ngaphakathi kanye nezinsiza, abasebenzi abaningi bathole uqeqesho emisebenzini yabo ngenhloso yokusimamisa indlela yethu yokusebenza. Sibonga kakhulu ozakwethu eMnyangweni noMgcini-mafa wesiFundazwe ngokusilekelela kulokhu. Ngaphandle kosizo lwabo, besingeke sikwazi ukubhekana nezindleko ebezikhona. Ngaphandle kokuhlinzeka izivakashi zethu ngempatho efudumele ngesikhathi semidlalo yeNdebe yoMhlaba kanye nangemuva kwayo, enye ingxenye yalolu hlelo lokulungiswa
kabusha wukukleliswa okungewaseNingizimu Afrika-okuyinto ezosihlomulisa esikhathini esizayo ngisho sekudlule isasasa lemidlalo yeNdebe yoMhlaba. Izifundo zoqeqesho kubandakanya amakhono oKwamukela iziVakashi, ezokuThengisa, ezokuKhombisa ngeziNdawo zokuVakasha, ukuHlanzwa kweziNdlu kanye nokuHlinzeka amaKhasimende ngemisebenzi eseqophelweni eliphezulu. Ngebhadi isivumelwano esihle sezindawo zokuhlala esisibeke ezithebeni ze-Match, okuyinkampani egunyazwe yiFIFA ukuyisingathela izindawo zokuhlala, siphunzile. Izindaba eziconsisa amathe ngezokuthi ithimba lethu lezokuKhangisa ngeBhizinisi likwazile ukuphendula amatafula ngokushesha futhi lathola abantu ababekise lezi zindawo ngalesi sikhathi. Imicimbi emnandi kanye nezinhlelo zebhizinisi kwenziwe ngezinsuku ezifanayo ngaphambi komcimbi omkhulu. Kuyangithokozisa ukunazisa ukuthi sikwazile ukuthola lokhu kukleliswa ebesikudinga e-Giantâ&#x20AC;&#x2122;s Castle, eDidima, eThendele, eNtshondwe kanye naseHiltop. IMpila kanye noMlalazi isesohlelweni lokukleliswa kanti ngiyathemba ukuthi ngizonethulela izindaba ezimnandi ngalezi zindawo ezimbili zokulala oshicilelweni olulandelayo lweNkanyezi. Lolu hlelo lusaqhubeka kanti silindele umbiko oqondile walokhu kukleliswa esikhathini esizayo. Izindawo zokulala ezibaluliwe zidlule ngehubo ekuhlolweni kokuKleliswa eziNgeni
lesiThathu kanti sizomemezela
ehlukahlukene phakathi kweqembu lethu kanye naweminye iminyango
Phakathi kwemicimbi emnandi ebe kwe-Orlando Pirates neKaizer Chiefs, umcimbi wosuku lwemindeni obeluqondiswe emiphakathini yase-Midmar obubanjelwe e-Thurlow House khona e-MidNguDkt Bandile Mkhize onguMphathi Omkhulu
nokukhangiswa nokudayiswa kobuciko obakhiwe ngamalungu omphakathi. Yize bekungelula ukusingatha lezi zinhlelo kuyona yonke imiphakathi engomakhelwane bethu, sibe nohide “lwemiqhudelwano yokuhlwaya ithalente” phakathi kwayo bekuyizikole ezihlanganise umculo, umdanso kanye nezimbongi noma izinkondlo okusenze sakwazi ukubheka ithalente ebesingalisebenzisa emidlalweni yeNdebe yoMhlaba. Umcimbi omkhulu ububanjelwe eMlalazi Nature Reserve ngoNhlaba kanti ube yimpumelelo. Ngesikhathi sokugubha ukusala kwezinsuku ezingama-30 kuqale umqhudelwano, sihlele umqhudelwano webhola lezinyawo esifundeni saseZululand kanye nasoGwini. Bekunemidlalo eHluhluwe-Im-
folozi Park phakathi kwe-Ezemvelo KZN Wildlife, abaSebenzi basesiBhedlela sakwaHlabisa, othisha bezikole zendawo kanye ne-SAPF. Ogwini, imidlalo ibiphakathi kwe-Ezemvelo KZN Wildlife, i-SA Navy, SAPF kanye nekilabhu yomphakathi. INdawo yoMphakathi yokuBuka imidlalo (PVS) ibihlinzekiwe eMidmar ngokubambisana noMasipala waseMgungundlovu. Ngemuva nje kokuqala kwemidlalo yeNdebe yoMhlaba, yesekwe kakhulu kwi-PVA yethu eveze bukhoma imidlalo emithathu yeBafana Bafana ngokunjalo nomdlalo wamanqamu. Empeleni imidlalo yeNdebe yoMhlaba ka-2010 ibe yimpumelelo enkulu kanti thina kwa-Ezemvelo KZN Wildlife siyaziqhenya kakhulu ngokuba
yingxenye yayo yonke le nto. Abantu abaningi basemazweni angaphandle bathuke kabi bebona izwe lethu futhi iningi labo lithembise ukuphinde livakashe. Ngithanda ukubonga bonke ababambe iqhaza ngandlela thile ngokusebenza ngokuzikhandla nangomfutho eniwukhombisile ngesikhathi semidlalo yeNdebe yoMhlaba ka-2010. Konke sekusezandleni zethu kanti-ke sekumele siphinde sigxile emisebenzini yethu emqoka. Izinselelo esisabhekene nazo zinzima kakhulu kodwa izinga lokusebenza kwethu ekwenzeni imidlalo yeNdebe yoMhlaba ibe yimpumelelo liyizinkomba zokusebenzisana kanti-ke nginesiqiniseko sokuthi sizokwenza imisebenzi yokongiwa kwemvelo ngempumelelo.
Isibonelo esisodwa somfutho wethu oqhubekayo, ukusayinwa kwesiVumelwano sokuSebenzisana phakathi koMnyango wezokuNgcebeleka kanye nezokuVakasha waseNyuvesi yaseZululand ne-Ezemvelo KZN Wildlife ngoNtulikazi okudale amathuba okusebenza ngokubambisana phakathi kwalezi zinhlaka emkhakheni wezokucwaninga kanye nakubafundi abangakaziphothuli izifundo zabo. Umsebenzi wethu omqoka wokongiwa kwemvelo kawumanga ngesikhathi semidlalo yeNdebe yoMhlaba kanti ngizonazisa kabanzi ngalokhu oshicilelweni lwethu olulandelayo lweNkanyezi.
INYUVESI YASEZULULAND IZOSEBENZA NGOKUBAMBISANA NE-EZEMVELO KZN WILDLIFE Kusayinwe isivumelwano sokusebenzisana phakathi koMnyango wezokuNgcebeleka nezokuVakasha waseNyuvesi yaseZululand ne-Ezemvelo KZN Wildlife ngoLwesine lo mhla zingama22 kuNtulikazi, okuzodala amathuba okusebenza ngokubambisana phakathi kwalezi zinhlaka emkhakheni wezokucwaninga kanye nakubafundi abangakaziphothuli izifundo zabo. USekela-Shansela wase-Unizulu, uSolwazi Fikile Mazibuko uthe lesi sivumelwano sivuselela inkontileka yomphakathi ebophezela zombili lezi zinhlaka enhlosweni eyodwa njengezibambisene emfundweni yezinga eliphezulu kanye nasezinhlelweni zokuthuthukisa ulwazi. USolwazi uMazibuko uthe uyathemba ukuthi i-Ezemvelo izosebenzisa izinsiza zenyuvesi uku-
bamba izingqungquthela kanye nemihlangano futhi izibandakanye ezifundweni ezijwayelekile zomphakathi ngokunjalo nasezinhlelweni zentuthuko, lapho inyuvesi izofunda lukhulu emphakathini kanti nomphakathi uzofunda lukhulu kuyona. “Le nyuvesi ngeyethu sonke; kanti silapha njengomgogodla wemfundo yezinga eliphezulu ukusebenzela umphakathi wakuleli lizwe, ikakhulukazi abantu abasha kanye nokubasiza ukuba babe yizifundiswa zangempela ngokubafaka ezintweni ezizobakhulisa ngokomsebenzi,” kusho yena. UMphathi Omkhulu we-Ezemvelo uDkt Bandile Mkhize uthe lesi sivumelwano sizoqinisa kakhulu ubudlelwane bokusebenzisana
obukhona nomnyango futhi sizodala amathuba amaningi okuthi izifundiswa zenze ucwaningo ngezinto ezahlukahlukene zomkhakha wokungcebeleka kanye nowezokuvakasha ezindaweni ezivikelekile. Olunye ucwaningo luzokwenziwa ngokubambisana, lwenziwe ngokuhlanganyela ne-Ezemvelo ngokunjalo nemiphakathi engomakhelwane bezindawo ezivikelekile. UDkt Mkhize obengumfundi eUnizulu futhi oke waba yilungu loMkhandlu wale Nyuvesi, uthe i-Ezemvelo KZN Wildlife ivule izandla ekusimamiseni ubudlelwane nanoma ngabe yimuphi umkhakha okanye umnyango wangaphakathi enyuvesi ngoba
INyuvesi yaseZululand kanye ne-Ezemvelo KZN Wildlife basayina isivumelwano sokusebenzisana. Kwesobunxele: nguDkt Thandi Nzama oyiNhloko yoMnyango wezokuNgcebeleka kanye nezokuVakasha eNyuvesi yaseZululand, nguSolwazi Nomahlubi Makunga oyi-Dean ePhethe eMkhakheni wezobuCiko, uSthabiso Chiliza oyiMenenja yezokuSimamiswa kwamaBhizinisi, nguSudhir Goorah oyiMenenja yeziNhlelo kanye nobuNgozi kwaEzemvelo, uShansela uSolwazi Ntombiﬁkile Mazibuko onguSekela-Shansela, uDkt Bandile Mkhize onguMphathi Omkhulu we-Ezemvelo KZN Wildlife.
idinga ubudlelwane ukusimamisa umqondo wokuvikelwa kwemvelo ukulungiselela ezokuvakasha. “Izinjongo eziqhelile kuﬁnyeleleka kalula kuzona ngokubambisana,” kusho yena. UDkt Thandi Nzama oyiNhloko yoMnyango wezokuNgcebeleka nezokuVakasha e-Unizulu, uthe lobu budlelwano bungobokuqala ngqa ukwenziwa phakathi kwesikhungo semfundo ephakeme esifundazweni kanye ne-Ezemvelo. Uthe ngalobu budlelwano, abafundi bebanga lesithathu kwiBhashela yezokuVakasha bathole ithuba lokufunda ngokuzibambela mathupha okuyisidingo esimqoka ezifundweni zabo.
I-EZEMVELO KZN WILDLIFE IGUBHA USUKU LOKUZALWA KUKAMANDELA UMbali Fraser oyilungu leKomidi lezoKongiwa kweMvelo ngokubambisana nabasebenzi be-Ezemvelo KZN Wildlife kanye namalungu kaSoseshini wamaTekisi obizwa nge eMahlutshini, batshale izihlahla enkambini yamatekisi (emzileni waseHlathikhulu) ngenhloso yokugubha imizuzu engama-67 yosuku lokuzalwa kukaMandela. UNksz Fraser ubonge umphakathi obambe iqhaza emtholampilo waseNcibidwane, abeNkambi yamatekisi kanye neLangalibalele Art Craft ngokunjalo nabe-Laundly cleanup ngokugubha lolu suku. Uthe ukutshalwa kwezi zihlahla kuwuphawu lokuphila kanti ukuhlanza indawo kukhombise ukuziqhenya komphakathi ngayo. “Siyakholwa wukuthi silethe impilo engcono kule nkambi ngenxa yamatekisi yokutshala lezi zihlahla,” kusho yena. Ubonge umphakathi ngokuzibandakanya kwawo emkhankasweni wokuhlanza indawo. Uqhakambise ukuthi uNelson Mandela uyindoda ethanda uxolo futhi unxenxe umphakathi osebenzisa inkambi yamatekisi ukuba uthathe lezi zihlahla ebezitshalwa (iPhuphuma) njengophawu loxolo. I-Ezemvelo iphinde yanikela ngamaphasela okudla emindenini edonsa kanzima endaweni yaseMahlutshini ngesikhathi kugujwa uSuku lokuzalwa kukaMandela. UNikiwe Sithole oyilungu lomphakathi, uhlonze umndeni
wakwaHadebe njengoswele kakhulu kanti ube esecela i-Ezemvelo ukunikela ngezingubo zokumbatha kanye nokudla. Lo mndeni onamalungu angama-23 uthembele kwimpesheni kaGogo ukuze uphile. UNksz Fraser uthembise umndeni wakwaHadebe ukuthi uzonxusa abasebenzi boMnyango wezeNhlalakahle yoMphakathi ukuba bawusize. UMnuz Bheki Khoza ungeze ngokuthi i-Ezemvelo KZN Wildlife iyayinakekela imiphakathi engomakhelwane bezindawo ezivikelekile kanti futhi iqhuba ngendlela imisebenzi yokongiwa kwemvelo. Inhloso ye-Ezemvelo KZN Wildlife “ukuqinisekisa ukuphathwa ngendlela efanele futhi enenqubekela phambili kwemvelo yaKwaZulu-Natali kanye nezindawo ezivikelekile ngokubambisana nezinhlaka zayo.”
Ezemvelo Igubhe i-World Cup 2010 Kanje
AbaQaphi beMvelo bakwa-Ezemvelo bahlomule ngezitifiketi zokusebenza kahle Abaqaphi bemvelo boPhiko oluLwisana nokuZingela okungekho emthethweni abazinze e-Isimangaliso Wetland Park, baklonyeliswe ngezitiďŹ keti zokusebenza kahle kanye nangemali nguMphathi Omkhulu we-Ezemvelo uDkt Bandile Mkhize ngokuzikhandla kwabo emsebenzini kanye nokubeka izimpilo zabo engozini ngesikhathi bebhekene nabazingeli abahlomile futhi abayingozi ngokunjalo nezinye izigameko ezingekho emthethweni ezenzeka endaweni evikelekile e-Isimangaliso. Umsebenzi wabo ubandakanya ukuvundululwa koqhwasha abalayishwe izinhlamvu, inhlokohlela yohlobo lwe-303, i-38 special revolver, abazingela ngokungemthetho ngezinja ababanjwe ngempumelelo base bethweswa amacala. Abathole imiklomelo noBheki Khoza ongumQondisi Ophethe oPhikweni lwezoKongiwa kweMvelo, uDkt Bandile Mkhize onguMphathi Omkhulu we-Ezemvelo kanye noBuhle Ndunakazi oyiMenenja-Jikelele yoPhiko lweziNdaba zabaSebenzi.
Ezemvelo Vuvuzela Friday Abasebenzi be-Ezemvelo bebhiyozela ukufutha amavuvuzela ngaphandle kwehhovisi.
UKUSEBENZELA OGWINI – UHLELO LWASENHLA NOGU Ukusebenzela oGwini – Uhlelo lwaseNhla noGu: Lolu hlelo lusuka eBallito luze luyoshaya e-St Lucia kanti luqhutshwa ngaphansi kweMikhandlu yoMasipala emibili okuyiLembe kanye noThungulu enoMasipala abayisi-5 ngaphansi kwayo (okungowaKwa Dukuza owaseMandeni, owaseMlalazi, uMhlathuze kanye nowaseMfolozi). Lolu hlelo ngolokulwisana nobubha ngaphansi koHlelo oluNwetshiwe lwemiSebenzi yoMphakathi (EPWP) oluxhaswe ngezimali nguMnyango wezeMvelo (DEA).
Abazohlomula ohlelweni yilaba: OMasipala
UMhlathuze I-Mphembeni Esikhaleni E-Port Durnford Kwa Dlangezwa
AmaWadi UMhlathuze LM 13 UMhlathuze LM 18 UMhlathuze LM 18 UMhlathuze LM 10
UMlalazi I-Manzamnyama KwiWadi LM 20 yaseMlalazi Obanjeni KwiWadi LM 17 yaseMlalazi
Izinga lenzuzo engenayo Inzuzo ibeNcane Inzuzo ibeNcane Inzuzo ibeNcane Inzuzo ibeNcane
UkuKleliswa kwayo ngokwasemlandweni I-PDI I-PDI I-PDI I-PDI
Izakhiwo Izakhiwo zaseMakhaya Izakhiwo zaseMakhaya Izakhiwo zaseMakhaya Izakhiwo zaseMakhaya
Inzuzo ibeNcane I-PDI Inzuzo ibeNcane I-PDI
Izakhiwo zaseMakhaya Izakhiwo zaseMakhaya
Kwambonambi I-Nhlabane UMzingazi I-Sokhulu
KwiWadi LM 3 yaKwaMbonambi Inzuzo ibeNcane I-PDI KwiWadi LM 3 KwaMbonambi Inzuzo ibeNcane I-PDI KwiWadi LM 4 KwaMbonambi Inzuzo ibeNcane I-PDI
Izakhiwo zaseMakhaya Izakhiwo zaseMakhaya Izakhiwo zaseMakhaya
IMandeni E-Dokodweni OThukela EMatikulu KwaHlomendlini
KwiWadi LM1 yaseMandeni KwiWadi LM 3 yaseMandeni KwiWadi LM 1 yaseMandeni KwiWadi LM 4 yaseMandeni
Inzuzo ibeNcane Inzuzo ibeNcane Inzuzo ibeNcane Inzuzo ibeNcane
Izakhiwo zaseMakhaya Izakhiwo zaseMakhaya Izakhiwo zaseMakhaya Izakhiwo zaseMakhaya
KwiWadi LM 12 yaKwadukuza
Inzuzo ibeNcane I-PDI
KwiWadi LM 5 Kwadukuza
I-PDI I-PDI I-PDI I-PDI
Izakhiwo zaseMakhaya Izakhiwo zasemaDolobheni/ Izibonelelo zezindlu ezihlinzekwa nguHulumeni Izakhiwo zasemaDolobheni/Izibonelelo zezindlu ezihlinzekwa nguHulumeni
Iziphumo zoHlelo UMKHANDLU WESIFUNDA ILEMBE Ukusebenzela iziPhumo zohlelo loGu Inombolo.
UkuLawulwa kweziMila zokuﬁka kuleli UkuThuthukiswa kweziNsiza 1. Izimpawu zokukhanyisela iziVakashi zakuleli ngendlela zeziVakashi zakuleli 2. IDiphu lasoThukela mouth kanye nendawo yokupaka. 3. Izindlu zangasese zaseDokodweni eziseduze komsele wokuGeleziswa kwamanzi 4.Umfula uThukela kanye nezindawo zokushisa inyama 5. Imigqomo ewukhonkolo kadoti Ukulungiswa kwemizila kanye Ukulungiswa, ukuphendlwa nokwandiswa kwemizila kanye nemigudu esiQiwini nemiGudu saseMatigulu. Ukuphendlwa komzila obheke eBhishi lase-KDZ Ukuphendlwa/ ukuLungiswa Ukulungiswa, ukuphendlwa kanye nokulungiswa kwemigwaqo engenayo kwemiGwaqo
Ukusizwa kweziVakashi Ngezikhathi zebhizi (okunguZibandlela kanye nangamaHolidi ePhasika) Ukulungiswa kwe-APC ne-Dune I-1/3 yohlahlo mali ifakwe kwi-PA – ekuqhutshezelweni phambili kwezinhlelo zangaphambilini ze-WftC
UMasipala waseMandeni Izinhlaka ezingama-20 IsiQiwi saseMatigulu
UMasipala wakwaDukuza Izinhlaka ezingama-25
Esiqiwini Emabhishi saseMatigulu akwaDukuza Amatikulu kanye nomfula uThukela EMandeni kuphela Izinhlaka Izinhlaka ezingama-20 ezingama-25
UTHUNGULU UMkhandlu wesiFunda wasoThungulu– Usebenzela iziphumo zeziNhlelo zoGu Inombolo. Isiphumo UMasipala waseMhlathuze UMasipala wakwaMbonambi 1. Ukukhucululwa kweBhisi • E-Port Durnford • Indawo yokuNgcebeleka eBhishi lakwaMthiyane • Esikhawini • ImiSele yokuGeleziswa kwamanzi eNhlabane • EMpembeni • Ummango wakwa-Mbo (bekunabantu abayi-9 (kubenabantu abayi-9 eqenjini ngalinye) ethimbeni ngalinye)
UMasipala waseMlalazi • EsiQiwini saseMlalazi (bekunabantu abayi-9 ethimbeni)
Inombolo. Isiphumo 2. UkuLawulwa kweziMila zokuﬁka kuleli 3. IziNsiza zeziVakashi
UMasipala waseMhlathuze UMasipala wakwaMbonambi Ithimba elilodwa Akubangakhona lutho Ukulungiswa kwama kwamafulemi ka-A Izimpawu ezifundisayo
Ukulungiswa kwemizila kanye nemiGudu Ukuphendlwa/ ukuLungiswa kwemigwaqo
Ukulungiswa kwe-APC ne-Dune
Indawo yokuNgcebeleka eBhishi lakwaMthiyane– kufakwe iziTendi zokuShiswa kwenyama eziyi-6, imiGqomo kadoti eyi-8 Imisele yokuGeleziswa kwamanzi eNhlabane– iziTendi eziwu-3 zokuShisa inyama, imiGqomo kadoti emi-5
UMasipala waseMlalazi Esiqiwini saseMlalazi kube namathimba ama-2 Ukuthuthukiswa kwezinsiza eziKhona zokuDipha esiQiwini Amabhuloho ama-2 akhiwe ngamapulangwe e-Mangroves Ilitshe lesikhumbuzo sika Raphia Imizila esiQiwini
Kubenjengoba iNkosi iCelile: Indawo yokuNgcebeleka eBhishi lakwaMthiyane – 6km Ngaphakathi esiqiwini: +- 5kms +- 7kms 3 E-Port Durnford 3 EsiKhawini 3 EMpembeni Ngu-25%
Umsele wokuGeleziswa kwamanzi eNhlabane– 4km Izindawo ezi-3 zokuNgcebeleka eBhishi lakwaMthiyane Akubangakhona lutho Imisele emi-3 yokuGeleziswa kwamanzi eNhlabane Imimango ewu-3 yakwa-Mbo Ngu-25% Ngu-50%
Okuzuziwe ezinhlelweni zaphambilini Njengoba ingeNhla loGu bekuyilona ebeliPhethe uHlelo kwi-DEAT – oHlelweni oluNwetshiwe lwemiSebenzi yoMphakathi lwasoGwini, ihlanganise kuyo imikhandlu emithathu (okuyiLembe, uThungulu kanye noMkhanyakude) ngokuthi kwenziwe iziphumo eziyi-15, kuqashwe nabasebenzi abangama-536 kanti lolu hlelo lukwazile ukusungula luphinde luthuthukise osonkontileka abayi-11 abasezingeni labafufusayo. Umsebenzi ubandakanya ukuKhucululwa kweBhishi, kweziMila zokuﬁka kuleli, umsebenzi wokulungisa izakhiwo, ukuThuthukiswa kweziNgqala sizinda, ukuGxiliswa kokusetshensizwa kweMvelo kanye namaKhemikhali kepha kuye ngokwesidingo sohlobo lwesiphumo esidingekayo.
I-Ezemvelo isiphinde yahlabana ngophathina ezosebenzisana naye- kubika kuNtsiki Dlulane oyiMenenja oPhikweni lwezoKongiwa kweMvelo, ubuDlelwano kanye neziNhlelo. I-Ezemvelo KZN Wildlife ngeCPPMU, iqokwe wuMnyango wezeMfundo njengolunye lwezinhlaka ezizoqalisa izinhlelo zokwakhiwa kwengqalasizinda yezikole zalo mNyango. I-Ezemvelo KZN Wildlife ijutshwe ukuba iqhube uHlelo lokuThuthukisa iMfundo emabangeni aphansi (ECD). Lolu hlelo kuhloswe ngalo ukuhlinzeka i-ECD (ebangeni lika-R) ngamagumbi okufundela ezikoleni esifundazweni saKwaZulu-Natali lapho ingqalasizinda ingakaze ibe khona phambilini.
Iningi lalezi zikole zesezindaweni eziqhele kakhulu esifundazweni kanti lolu hlelo olusungulwe wuMnyango silwamulelwa ngezandla ezimhlophe njengoba luzovala igebe phakathi kwezikole ezisemadolobheni kanye nalezo ezisemakhaya. I-Ezemvelo iphinde yathola izicelo eziningi zoxhaso lwemali eziﬁkela ehhovisi lesiVivane soMphakathi zokuthuthukiswa kwengqalasizinda yezemfundo ikakhulukazi amagumbi okufundela, izinkulisa, amagumbi okufundela amakhompuyutha kanye nezakhiwo zokusebenzela. Zonke lezi zicelo zixhasiwe. Ngokubona ukuthi iMali yesiVivane soMphakathi iyashoda okuzokwenza ukuthi ingakwazi ukubhekana nezindleko ezifana nezinsiza, iHhovisi leziNhlelo licele uxhaso eMnyangweni wezeMfundo waKwaZulu-Natali, njengoba siqokwe njengoHlaka oluzoQalisa lo Msebenzi. Uhlelo lwe-ECD luzohlinzeka ngamagumbi okufundela ebangeni lika-R, izindlu zangasese zezingane ezincane kanye nendawo yokuvocavoca umzimba. Lezi zindawo zizobiyelwa ngocingo olungu-1.8m ukuya
phezulu. Lokhu kuzohlinzeka ngokuvikela ngokunjalo nokulawulwa okusezingeni eliphezulu ezikoleni njengoba izingane zijwayele ukuhlohlwa ngozakwabo ngokuganga uma zingekho izinhlelo zokulawula eziqondile. Leli yigxathu elihle kakhulu elithathwe nguMnyango wezeMfundo kanti thina kwa-Ezemvelo KZN Wildlife siyaziqhenya ngokuba yingxenye yalolu hlelo. Iningi lezingane zasemakhaya belingalitholi nhlobo ithuba lokufunda zisencane ngaphambi kokuba zibhalise ebangeni loku-1 kanti lolu hlelo kuhloswe ngalo ukulungisa lesi simo. Esikhathini esedlule, IEzemvelo KZN Wildlife ihlinzeke ngezinkulisa kanye namagumbi okufundela okwakhiwe ngeMali yesiVivane soMphakathi. Sibuka lokhu njengethuba lokuqhubeka nokuhlinzeka lezi zidingongqangi sibe sivumela ukuba iMali yesiVivane soMphakathi isetshenziselwe ukweseka ezinye izinhlelo. Ezinye izinhlelo zizogxila kakhulu ezinhlelweni ezizokwenza inzuzo ezizovulela imiphakathi ukuba iqhubeke nokuziphilisa futhi iphinde ibambe iqhaza ezinhlelweni zomnotho walesi sifundazwe.
Siphinde saqokelwa ukuhlela kanye nokuqalisa uhlelo lobuchwepheshe ezikoleni loMnyango wezeMfundo. Lolu wuhlelo lukazwelonke okuhloswe ngalo ukuhlinzeka ingqalasizinda ukuze izikole zikwazi ukufundisa izifundo zobuchwepheshe. Lokhu kuhlanganisa imihlangano yokucobelelana ngolwazi kanye namagumbi okufundela amakhompuyutha azokwakhiwa ezikoleni eziyisikhombisa esifundazweni. Lolu wuhlelo oluyingqophamlando oluqhamuke noMnyango wezeMfundo kanti i-Ezemvelo KZN Wildlife iyaziqhenya ngokuba yingxenye yalo. Zonke lezi zinhlelo zingabukeka sengathi zicezile emsebenzini wethu omqoka kodwa kuhloswe ngazo ukuqinisa ubudlelwane nemiphakathi. Lokhu kukhuthaza ukuphatha ngendlela efanele, okuyinto esiyidingayo njengenkampani kahulumeni uma sifuna ukubona ukuhlinzekwa kwezidingo okusezingeni eliphezulu kubantu bakithi kufezekiswa kunokuba kuphenduke iphupho nje.
Okuvela eHhovisi lokuHlelwa kweziNhlelo Ehhovisi lokuhlelwa kwamaSu, sibone ukubuyekezwa kwesu lebhizinisi lonyaka ka-2010 kuya ku-2014. Izinhloso zenziwe kahle futhi zamiswa ngendlela ehlukile. Izingxoxo ziholele ekutheni kwamukelwe lokhu okulandelayo:
2. INJONGO “Ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi wokongiwa kwemvelo wenziwa kahle futhi ukongiwa kwemvelo yaKwaZulu-Natali kwenziwa ngokubambisana nezinhlaka zethu, ukuze kuhlomule isizukulwane samanje nesangomuso”
3. IZIMISO EZIMQOKA • • • • • • • •
Ukwethembeka - ngaso sonke isikhathi sisebenza ngokwethembeka, senze ngendlela efanele kanye nangeqiniso. Inhlonipho - sibekezelela izinhlaka esisebenzisana nazo, ngokuzithoba sihloniphe amalungelo azo kanye nawendalo. Ukubika - sibambisana nezinhlaka zethu ezinhlelweni zenhlangano ngokuvuleleka kanti futhi siyakwazi ukuphendula ngemiphumela yesikwenzayo. Ukusebenza ngokubambisana - sisebenza ngokubambisana ukufezekisa umbono wethu ngokulandela izimpokophelo esinazo. Ukuphucuzeka - siyinhlangano ejwayelekayo esebenzisa isiko lokwamukela imibono emisha nelokufunda. Ukwenza kahle kakhulu - siyinhlangano enenqubekela phambili futhi esebenza kahle ukuzuza okusezingeni nokuseqophelweni eliphezulu. Ukuzibophezela - ngaso sonke isikhathi senza umsebenzi wethu ngothando, ngokwethembeka nangokuzinikela. Umkhiqizo - sizimisele ngokukhiqiza ngesikhathi, ngendlela esheshayo futhi efanele.
4. IZINJONGO KANYE NEZINHLOSO EZIPHUSILE I.
Ukusimamisa isimo sokongiwa kwemvelo esifundazweni saKwaZulu-Natali ukuze kuhlomule umphakathi (Iziphumo zikaHulumeni ze-10: UkuVikelwa kanye nokuSimamiswa kwezinsiza kanye nendalo) Ukonga imvelo engumsinsi wokuzimilela esifundazweni saKwaZulu-Natali ukuze kuhlomule isizukulwane samanje nesangomuso
• • • • • • • • • • IV.
zokuvakasha ngendlela esezingeni eliphezulu ngokuba yinhlangano ehleleke kahle ngesikhathi esifanayo sisebenzela inqubekela phambili ngokuphindiwe (Iziphumo zikaHulumeni zesi-9: Ukuphendula, ukubika, ukusebenza ngendlela efanele, uHlelo oluSheshayo loHulumeni baseKhaya) Ukusimamisa isimo sezimali Ukukhuphula izinga lokusebenzisa ngendlela imali Ukuba yinkampania kahuluneni esebenza ngendlela esheshayo, esobala, ngobuqotho futhi ebikayo ngekwenzayo futhi ephethe kahle (Iziphumo zikaHulumeni ze-12: Ukuhlinzeka imisebenzi yomphakathi ngendlela esheshayo, efanele futhi ehlose ukuthuthukisa ngokunjalo nokusimamisa, ubuqiniso kanye nokuba yisakhamuzi ngokugcwele) UkuThuthukisa kanye nokugcina izinga eliphezulu Ukuqalisa ukusebenza kwemisebenzi emisha kanye nemikhiqizo Ukwakhiwa kohlelo lokusebenzisana kumabhizinisi ahlukene kanye nezinhlaka ezithintekayo ukuze kuvele iziphumo ezinhle Ukuhlanganisa izinhlelo zokulawulwa kolwazi Ukulawula ubungozi enhlanganweni UkuPhatha ngendlela efanele futhi eshesheayo imali yenhlangano Ukusungula kanye nokuqalisa ukusebenza koHlelo lokulawulwa kolwazi Ukuhambisana nemithetho ethintekayo Ukuqalisa ukusebenza kwemigomo ebanzi ehambisana noguquko Ukusebenzisa amasu ngokuhlanganyela nezinhlaka ezithintekayo Ukuba ngumqashi okhethekile ngokusungula imisebenzi yezinga eliphezulu kanye nenhlalo-nhle enenqubekela phambili (Iziphumo zikaHulumeni ze-4: Imisebenzi esezingeni elifanele ngokuthi kubandakanywe ukuthuthukiswa komnotho/ Isiphumo sesi-5: Indlela yokusebenza ngamaKhono kanye nokukwazi ukwenza imiSebenzi ngendlela ukuze kwesekwe indlela yokubandakanya ukuthuthukiswa) Ukuheha kanye nokugcina i-Human Capital Ukwakha isiko lokufunda kanye nokuthuthukisa abasebenzi Ukuqalisa ukusebenzisa izindlela eziphusile ekulawulweni kwezempilo kanye nokunye okuphathelene nakho Ukunyusa izinga lokugculiseka kwabasebenzi Ukukhombisa izinga lemihlomulo edaleke ngokuqaliswa kwezinhlelo zenhlangano
Egameni lophiko lokuLawulwa kobuNgozi, kuyintokozo kimina ukubika ukuthi manje sesinenqubomgomo yokuLawulwa kobuNgozi esiyamukeliwe futhi esiqalisiwe ukusebenza. UkuLawulwa kobuNgozi kuyithuluzi elimqoka elizokwenza ukuthi inhlangano ikwazi ukunqanda lobo bungozi obungasiphazamisa ekufezekiseni izinhloso esizibekele zona. Njengomphumela wale nqubomgomo, kusungulwe iKomidi lokuLawulwa kobuNgozi uDkt Bandile Mkhize onguMphathi Omkhulu anguSihlalo walo. Yonke iminyango imelwe yizimenenja kanti abasebenzi bayanxuswa ukuthi babhunge ngezindaba zokulawulwa kobungozi kuwona wonke amazinga okusebenza.
Ukuhlinzeka imisebenzi yokongiwa kwemvelo kanye neye-
EZEMVELO KZN WILDLIFE STRATEGY MAP VISION
“To be a world renowned leader in the ﬁeld of biodiversity conservation”
Customer & Stakeholsers
“To ensure eﬀective conservation and sustainable use of KwaZulu Natal’s biodiversity in collaboration with stakeholders for the beneﬁt of present and future generations”
Conserve the indigenous biodiversity of KZN for the beneﬁt of present and future generations
Increase ﬁnancial resources
Implement best practices in management wellness and related activities
Develop and maintain quality standard
Optimise use of ﬁnancial resources
Manage organisational resources eﬀectively and eﬃciently
Attract and retain the best human Capital
Develop and implement knowledge management systems
Demonstrate the value of beneﬁts derived from the implementation of organisational programmes
Badaluliwe abanqobe uMncintiswano “wokuQanjwa kwaManqe” Umncintiswano “wokuqanjwa kwamanqe” ubusingethwe yiEzemvelo KZN Wildlife ngasekupheleni kuka-2009. Lo mncintiswano ubuvuleleke kubantwana abaphakathi kweminyaka eyisi-6 kuya kweyi-12 abafunda ezikoleni zamabanga aphansi ezingomakhelwane noKhahlamba Drakensberg Park World Heritage Site. Umncintiswano ubuyingxenye yohlelo lwamanqe lwe-Ezemvelo KZN Wildlife okuhloswe ngalo ukuthola amagama amanqe ayisihlanu anentshebe kanye nelilodwa lohlobo lwe-cape ahlonzwe ngemishini yobuchwepheshe besimanje ngo-2009. Ngokugaxa abantu abaningi imishini yobuchwepheshe besimanje, ongoti bezemvelo bakwa-Ezemvelo KZN Wildlife bazokwazi ukuhlonza indawo lapho kuhlala khona lezi zinyoni kanye nalapho ezithanda ukudlela khona. Inhlosongqangi yalo mncintiswano bekuwukuthi uphinde uqwashise ngobunzima amanqe abuthwele ezintabeni zaseMalo-
ti-Drakensberg kanye nobungozi lezi zinyoni ezibhekene nabo. Uhlelo lwamanqe lubandakanya ucwaningo lokuhlonza isibalo sohlobo lwamanqe anentshebe kanye nawe-cape futhi kuhlonzwe ubungozi lolu hlobo lwezinyoni olubhekene nabo ngokunjalo nokubhekana ngqo nembangela yokufa kwalo. Kuze kube yimanje, kusavela ukuthi ubuthi kanye nokungqubuzeka ezintanjeni zikagesi, yikhona okungubungozi obukhulu obubhekene nalezi zinyoni. Ngokubambisana neThimba lesiKhwama seziNyoni eziseNgozini yokuZingelwa, i-Ezemvelo KZN Wildlife izosungula izindlela zokubhekana ngqo nobungozi obulengela kulolu hlobo lwezinyoni futhi iqede nokuncipha kwazo ngokwezibalo ukuqinisekisa ukuthi abafundi bayakwazi ukubona lezi zinyoni ezinhle kangaka ekhulwini leminyaka elizayo Bobathathu abafundi abadle umhlanganiso kulo mncintiswano bavela esikoleni samabanga aphansi, Umganu esiseduze kwase-Underberg. UPhilani
Mtolo, uSenooe Karobe kanye noSindiswa Mila yibona abaphumelele. Igama eliphakanyiswe nguPhilani ngelithi Umcocimathafa, elisho ukuthi “gcina indalo ihlanzekile”. Igama eliphakanyiswe nguSenooe ngelithi Inkosi Yeentaka elisho ukuthi “iNkosi yeziNyoni” kanti eliphakanyiswe nguSindiswa ngelithi Umadlizidumbu, elichaza ukuthi “ukudla ingcuba.” Igama likaPhilani nelikaSenooe kuzoqanjwa ngawo amanqe amabili amancane anentshebe kuthi elikaSindiswa kuqanjwe ngalo iNqe eselilidala lesifazane lohlobo lwe-Cape. Inqe eliselincane lesifazane elinentshebe elahlonzwa ngomshini wobuchw e p h e s h e besimanje ngoMandulo ka-2009, laqanjwa ngokuthi ngu “Olivia” ngemuva kokuba uOlivia Taylor, okuyingane encane efunda edolobheni laseThekwini obeqongelela imali
yoHlelo lwamaNqe aneNtshebe futhi eqwashisa izinkampani ngobunzima obubhekene namanqe eNingizimu Afrika. Abadle umhlanganiso bazogixabezwa ngethuba lokuvakashela indawo lapho bezobona khona amanqe. Imidwebo ekhombisa ngezindlela zokuhamba kwezinyoni izothunyelelwa kubafundi masonto onke ukuze bezobona ukuthi bezikuthungatha kephi ukudla izinyoni zabo kusukela kuqale isonto. Lezi zinyoni ezine zijoyina iKloba, i-Aspen kanye neLehlwa, okungamanqe amancane anentshebe osekutholakele lapho evamise ukuhamba khona.
Ezemvelo Inkanyezi Zulu 2011